Raggii dilay AU Wariye Hindiya Xaaji oo maantay dil toogasho ah lagu filiyay Muqdisho – Radio Daljir
Raggii dilay AU Wariye Hindiya Xaaji oo maantay dil toogasho ah lagu filiyay Muqdisho
Abriil 9, 2016 7:34 b 0
Muqdisho, April, 09 – 2016 Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay rag loo haystay Dilkii Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo dabayaqadii sanadkii hore qarax gaarigeeda loogu xiray ugu dhimatay Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Qalabka sida ee Dawlada Soomaaliya ayaa maanta fagaare ku yaal Dugsiga tababarka Booliska ee loo yaqaan Iskuul Polisio ku toogtay Xasan Nuur Cali Faarax iyo C/risaaq Maxamed Barrow oo ay Maxkamada Ciidamada Qalbka sida horay toogasho ugu xukuntay.
Dilka ragan ayaa kusoo aadaya xili dhawaan sidan oo kale dil toogasho Maxkamada Sare ee Ciidamada qalabka sida ugu xukuntay Xassan Xaaji Xanafi oo isagana loo haysto dilka Wariyayaal dhawr ah.
Maahan Dilkii ugu horeeyey oo ay Maxkamada Ciidamada qalabka sida ku fuliso rag loo haysto dilal ama inay xiriir dhow la leeyihiin Xarakada Al-shabaab.
Ismaaciil Cumar Geele oo markii afaraad loo doortey Madaxweynaha Jabuuti